डडेल्धुरामा निःशुल्क सेवा दिएर बझाङ लागे डा. गोविन्द केसी ,सम्मान स्वरुप शेयर गरौ। – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /News/डडेल्धुरामा निःशुल्क सेवा दिएर बझाङ लागे डा. गोविन्द केसी ,सम्मान स्वरुप शेयर गरौ।
डडेल्धुरामा निःशुल्क सेवा दिएर बझाङ लागे डा. गोविन्द केसी ,सम्मान स्वरुप शेयर गरौ।
डडेल्धुरा : डडेल्धुरा अ,स्पतालमा दुई महिना निःशुल्क सेवासेवा पूरा गरी डा. गोविन्द केसी बझाङतर्फ लागेका छन् । गत फागुन २० गते उनी डडेल्धुरा पुगेका थिए । अ’र्थोपेडिक सर्जन (हा’डजोर्नीका श’ल्यचिकित्सक) केसी डडेल्धुरा रहँदा हा’डजोर्नीसम्बन्धी स,मस्या भएका धेरै सुदूर पहाडवासीले वि’शेषज्ञ चि,कित्सक सेवा पाएका थिए। डडेल्धुरा अ,स्पतालका सूचना अधिकारी टंकप्रसाद पन्तका अनुसार केसीबाट सेवा लिन डडेल्धुरासहित बैतडी, बझाङ, दार्चुला र डोटीका बि,रामी आउने गरेका थिए।
अ,स्पताल प्र’शासनका अनुसार केसीले डडेल्धुरा अ,स्पतालमा हुँदा २ हजार बढी सा’मान्य र करिब ४ सयको हाराहारीमा अ,प्रेसन गरेका थिए। यद्यपि उनले कति ’बि,रामी जाँ’चे भन्ने य,किन त,थ्यांक नरहेको अ,स्पतालले जनाएको छ। अ’र्थोपेडिक वार्डमा अन्य चि’कित्सक समेत भएका हुँदा डा. केसीले मात्रै चे’कजाँच गरेको त,थ्यांक नरहेको सूचना अधिकारी पन्तले जानकारी दिए। ल,कडाउन अघिसम्म उनीसँग उ,पचार गराउन धेरैको भी’ड लाग्ने गरेको थियो। तर ल,कडाउनका का,रण बि’रामीको चा’प भने केही कम भएको थियो।
धेरैजसो बि’रामीले उ,पचार गर्न आउँदा डाक्टर केसीलाई भगवानको सं’ज्ञा दिने गरेको अ,स्पतालमा कार्यरत क,र्मचारी रमेश भट्टले बताए। ६५ दिन डडेल्धुरा अ,स्पतालमा सेवा प्रदानपश्चात् सुदूरपश्चिमको विकट जिल्ला बझाङ गएका उनले जानकारी दिए। ‘दुईमहिने निःशुल्क सेवा दिएर हिजो मात्रै उहाँ (केसी) बझाङ जानुभएको छ। अब केही दिन उतै सेवा दिनुहुन्छ’, उनले भने। दिनमा एक छाक मात्रै खाना खाने गरेका डाक्टर केसीले अ,स्पतालबाट कुनै रकम नलिएको र उल्टै बि’रामीका लागि औ’षधिसमेत कि’निदिएका भट्टले बताए।
उनका अनुसार डा.केसीले ३५ सय पर्ने १५ जोडा बै’शाखी कि’नेर अ,स्पताललाई दिएका छन्। मिडियाबाट टाढै रहने केसीको अब डडेल्धुराबाहेक अन्य पहाडी जिल्लामा घुम्ने यो’जना रहेको भट्टले बताए। २६ वर्षदेखि त्रिवि शिक्षण अ,स्पतालका अ’र्थोपेडिक प्राध्यापक एवं वि’शेषज्ञका रुपमा कार्यरत चि,कित्सिक केसीले उठाएका मा’गहरू हालसम्म स’म्बोधन भएका छैनन्। केही केसीले ल,कडाउनका कारण यातायात ब’न्द हुँदा मारमा परेका बि’रामीहरुलाई सरकारी गाडीको प्रयोग गरेर अ,स्पतालसम्म पु¥याउन आ’ग्रहसमेत गरेका थिए।
९ वैशाखमा प्रेस वि’ज्ञप्ति जारी गर्दै को’रोना भाइरस (को’भिड–१९) नि,यन्त्रणजस्तै ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकको स्वास्थ्य सेवा महत्वपूर्ण भएको भन्दै केसीले यस्तो आ’ग्रह गरेका थिए। अहिलेको अवस्थामा एम्बुलेन्सहरुले मात्रै सबै बि’रामीलाई अ,स्पताल पुर्‍याउन पर्याप्त नभएको भन्दै उनले सो मा’ग गरेका हुन्। तर, उनका मा’ग सरकारले सुनेन।
लकडाउन अबधिभरीको घरभाडामा मिनाहा गर्न अपिल
विवाह गर्नको लागि आज सम्म राम्रो जीबन साथी पाएको छैन् : सोनाक्षी सिन्हा
कुहिएको र किरा परेको मासु पखालेर बेचेको पाइयो, दशैँमा मासु किन्दा ध्यान दिनुहोस् है